Askari Toogsho Ku Dilay Cayaartooy Ku Sugnayd Garoonka Kubbada Baladxaawo – Heemaal News Network
Askari Toogsho Ku Dilay Cayaartooy Ku Sugnayd Garoonka Kubbada Baladxaawo
Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya in shalay gelinkii dambe askari “ka tirsan” ciidamada dowladda uu rasaas ku furay dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa garoon lagu ciyaarayay kubadda cagta oo ku yaalla gudaha degmada Beled-xaawo, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho leh.
Askariga oo ku hubeysnaa qoray Ak47 ah, isla-markaana ku socday Mooto Bajaaj ayaa la sheegay inuu tegay garoonka, xilli ay ka socotay ciyaar, kuna sugnaayeen dadweyn fara badan, wuxuuna kadib ooda uga qaaday rasaas, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Inta la xaqiijiyey waxaa dhacdadaasi ku dhintay ugu yaraan labo wiil oo ka mid ahaa dhalinyarada ciyaartoyda ee degmada Beled-xaawo, waxaana lagu kala magacaabi jiray, Zakariye Axmed Gaarane iyo Sharma’arke Cabdul, sida uu VOA Aadan Cumar Barkhadle.
Barkhadle oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa sheegay inuu si bareer ah askarigaasi rasaasta ugu furay ciyaartoyda iyo dadkii kale ee daawanayey ciyaarta xilligaasi socotay.
“Wuxuu ahaa nin orod ku yimid iyo qof dan-leh Bajaaj ku socday Bajaajta marka ay soo istaagtayna qoriga xabadda raacsaday naga leexi la yiri markii naga leexi la yiri meeshii uu ka leexin lahaa dadka qoriga ujeed kasta uu lahaaba rasaastii buu ooda uga qaaday labadaa wiil ayeyna haleeshay siyaabo halis ahna ayey ugu dhacday,” ayuu yiri Aadan.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in labada wiil ee geeriyootay ay ahaayeen dhalinyaro aad u firfircoon, isla-markaana si weyn looga yaqaanay deegaanka.
“Labada wiil ee ka midka ahey dhalinyrada ciyaartoyda ah ee degmada Beled-xaawo weliba kuwooda la oran karo waa ubaxii hadda soo kacaayey oo ugu yar yar laba nin oo maashaa allaah oo firfircoon-bey ahaayeen oo aad u wanaagsan, aad loo jecelyahay,” ayuu raaciyey.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa haatan sheegaya in gacanta lagu soo dhigay askariga lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey falkaasi, kaas oo isku dayey inuu baxsado, waxaana socda baaritaano dheeri ah oo ku aadan dhacdadaasi ay waxyeelada kasoo gaartay ciyaartoyda.
Si kastaba, lama oga sababta rasmiga ah ee uu askarigan u beegsaday garoonka ay ciyaarta ka socotay, mana jiro war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Gedo.
Somalia provides 1 mln USD for drought response
Maraykanka Oo Faragaliyay Xiisada Deni & PSF-ta Puntland
Manchester United Oo Xasuuqday Roma
Heemaal April 30, 2021
Dhakhaatiir Loo Maxkamadaynaayo Dhimashadii Maradoona
Heemaal May 21, 2021
Athletico Madrid Oo Ku Guulaysatay Koobka Spain Lalig
Heemaal May 23, 2021
Masuul ka Tirsan Dowladda Oo Weerar Afka ah ku Qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh
HRW Oo Xasan Sheekh ka Dalbatay In Dib loo Baaro Shaqaalihii Lagu Xasuuqay Golaley
Masar Oo Xabsiga kasii Daysay Gabadh Somaliyeed Oo Dishay Nin Kufsan Rabay.
Maxkamad Go’aan Xasaasi ah ka Gaartay Dacwad ka Dhan ah Donald Trump Iyo Caruurtiisa
Maxkamada Jabuuti Oo Xakun Xabsi ah ku Riday Madax Sare Oo Cod Sir ah ka Faafiyay M/Geele